नेपाल आज | रवीन्द्रको निर्वाचन क्षेत्रबाट एकाएक किन पछि हटे बामदेव ?
हिजो शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालयको बैठकमा गौतमले उपचुनाव नलड्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । यद्यपि यसलाई औपचारिक धारणाको रुपमा नलिने र थप अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।
यसैबीच गौतमले सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै आफूले कास्कीबाट उपनिर्वाचनमा नउठ्ने धारणा बाहिर ल्याएका छन् । उनले स्थानिय पार्टीका साथीलाई नै अवसर दिनुपर्ने भन्दै आफू उपर्निवाचनमा कास्कीबाट भाग नलिने उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको १५ फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त भएको कास्की २ मा उपचुनाव हुँदैछ । यहाँ गौतम उठ्ने भन्ने चर्चा थियो । उक्त चर्चाका बीच गौतम एकाएक पछि हटेपछि भने स्व. अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई यस क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बलियो भएको छ । उनी अखिलकी पूर्वनेतृ समेत हुन्।